#NABShow Social Media Dashboard @BroadcastBeat | ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 NAB ပြရန် » အဆိုပါ #NABShow လူမှုမီဒီယာ Dashboard ကို @BroadcastBeat ကြေညာ
သငျသညျစတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ထဲမှာအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ယူလာရန်ကျူးလွန်, အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း " www.broadcastbeat.com"မကြာသေးမီကထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်းက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဆိုရှယ်မီဒီယာဒိုင်ခွက်ကဆက်ပြောသည်သိရသည်။
ft ။ Lauderdale, FL (GCOMM) ဖေဖော်ဝါရီလ 26th, 2015 "အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat" သင်တစ်လူမှုမီဒီယာ Dashboard ကိုပေးခြင်းအားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ထိပ်ဆုံးဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျအစဉျအမွဲသိချင်ပါလျှင်သင် 2015 အပေါ်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်နှင့်လက်ရှိနေထိုင်နိုင်ရှိရာ NAB ပြရန်သငျသညျအဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်သင်အကြိုက်ဆုံးထုတ်လွှင့်-စက်မှုလုပ်ငန်းက်ဘ်ဆိုက်ထက်ကိုကြည့်လိုအပ်ပါတယ်။ ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်းမှသာပေါ်ရရှိနိုင်သစ်ကိုလူမှုမီဒီယာ Dashboard ကိုနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေး၏ရှေ့တန်းမှပေါ်မှာ Beat www.broadcastbeat.com.
တွစ်တာ Tweets Facebook ကစာတိုက်, RSS feeds, YouTube ကိုရှာဖွေမှု ... သူတို့အားလုံးရှိနေ (နှင့်လည်းအခြားသူများ), တစျခုအဆင်ပြေစာမျက်နှာမှာ, သင်တို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစောင့်ဆိုင်း။ up-to-The-မိနစ်သတင်းအချို့နဲ့အခြားဆိုင်များတွင်အဆိုပါ 2015 ကနေတိုက်ရိုက်သတင်းပို့နိုင်မီကရှည်လျားဖြစ်ပျက်အဖြစ် NAB ပြရန် ကြမ်းပြင်။
ထုတ်လွှင့် Beat သင်၏အချိန်ဘယ်လောက်အဖိုးတန်နှငျ့သငျ bounce-န်းကျင်ရန်အင်တာနက်ဖြုန်းခန့်ရှိထုတ်သွင်းထားခံရမယ့်အဘယ်အရာကိုမြင်နိုင်ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အချိန်သိတယ် NAB ပြရန်.
ထုတ်လွှင့်ဘိသငျသညျရှိနေကြောင်းသေချာစေရန်လည်းမရှိ။ နေ့စဉ်ဘလော့ဂ်များစဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ကို up-to-The-ယခုအချိန်တွင်သငျသညျစောငျ့ရှောကျကူညီခြင်းနှင့် NAB ပြရန် အတက်အကျများ၏ tiniest ကနေအဓိကပြုပြင်မွမ်းမံရန်။
ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်းစတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးလူတွေစောင့်ရှောက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ဖြစ်ပါတယ် Beat ။
2014 NAB ပြရန် 2014 NAB ပြရန် 2014 NAB ပြရန်, NAB ပြရန် 2014 2015 NAB ပြရန် အသံလွှင်း Facebook က Instagram ကို NAB ကွန်ဗင်းရှင်း Show ကို 2015 NAB လူငယ်ကဏ္ဍကွန်ဗင်းရှင်း၏အမျိုးသားအစည်းအရုံး social media Dashboard ကို တွစ်တာ 2015-02-26
ယခင်: ညွှန်ကြားရေးမှူး David Semel အမေဇုံဖို့အမြင့် Castle အတွက် Phillip K. ဒစ်ခ်၏ The က Man ဆောင်ကြဉ်း
နောက်တစ်ခု: Digigram NAB Show ကိုကုန်ပစ္စည်းအစီအစဉ်များကြေညာ